Scaffolding zvinoreva zvitsigiso zvakasiyana zvakavakirwa panzvimbo yekuvakira kuti vashandi vashande uye vagadzirise kutenderera kwakamira uye kwakatwasuka. Zvikurukuru zvevashandi vekuvaka kuti vashande kumusoro uye pasi kana kuchengetedza yekunze chengetedzo mambure uye nekuisa zvikamu panzvimbo yakakwirira. Kune mhando dzakawanda dzekukwirisa. Kunyanya anosanganisira: kushanda rwemichinjiko hurongwa, dziviriro rwemichinjiko gadziriro uye mutoro inobereka uye rutsigiro rwemichinjiko hurongwa.
Zvinoenderana nenzira yekutsigira iyo scaffold, kune zvakare pasi-yakamira scaffolding, iyo yakatumidza zvakare kuti scaffolding tower, yakafukidza scaffolding uye yakaturika scaffolding. Kwese kukwera scaffold (kunonzi "kukwira scaffolding") ikozvino kwanyanya kushanda senzira yakazvimirira muindasitiri yekuvaka.
Iyo scaffolding system ndeimwe yeanonyanya kukosha maratidziro uye masisitimu ekuchengetedza kwakachengeteka muinjiniya yekuvaka. Tinoriidza iyo yakachengeteka nzira yekuchengetedza. Sampmax Kuvaka kunoitira hanya kuchengetedzwa kwemamwe mapurojekiti evatengi vedu anoshanda. Ese masisitimu ekumisikidza ayo atinopa anosangana nemipimo yekuenderana inoenderana.
Tichishandisa Sampmax Kuvaka scaffolding kuvaka, tinoyeuchidza vatengi kuti vateerere kune akajairwa matambudziko:
Kugadziriswa kwenheyo kunokonzeresa kudzoreredza kwemuno kweiyo scaffold. Kuitira kudzivirira kupunzika kana kudonhedzwa kunokonzerwa nekushomeka kwemuno, zvimiti kana zviyero zvechigadziro zvinomiswa pachikamu chinotenderera chefuremu rakakombama, uye seti yematanda akatwasuka akamiswa mumutsara kudzamara nzvimbo yetsananguro yakarongedzwa kunze. Iyo horoscope kana rutsoka rutsoka rutsoka runofanira kuiswa pane yakasimba uye yakavimbika hwaro.
Iko kutsauka uye deformation yeiyo cantilever simbi danda pane iyo scaffolding yakadzika midzi inodarika iyo yakatarwa kukosha, uye chinotsigisa poindi kumashure kweiyo cantilever simbi danda inofanira kusimbiswa. Kumusoro kwedanda resimbi kunofanirwa kusimbiswa nezvitsigiro zvesimbi uye mabhureki akafanana neU kuti adzivirire padenga. Pane mukaha pakati peyakadzikwa simbi mhete nedanda resimbi, iro rinofanirwa kuchengetedzwa nechuru chebhiza. Tambo dzesimbi dzesimbi kumucheto kwekunze kwematanda esimbi akarembera dzinoongororwa imwe neimwe uye dzese dzakasimbiswa kuona simba rakafanana.
Kana iyo scaffolding ichidzikisa uye yekudhonza yekubatanidza sisitimu yakakuvara zvishoma, inofanirwa kudzoreredzwa nekukasira maererano neinodzura nzira yekudhonza yakarongedzwa muchirongwa chepakutanga, uye zvikamu zvakaremara nenhengo zvichagadziriswa. Ruramisa iyo yekunze deformation yeiyo scaffold munguva, ita kuomarara kubatana, uye sunga tambo tambo panzvimbo yega yega yekuburitsa kuti ive yunifomu yechisimba, uye pakupedzisira isunungure inverted cheni.
Munguva yekuvaka, kuteedzana kwekumisidzana kunofanirwa kuteverwa zvakanyanya, uye matanda ekubatanidza anofanirwa kumiswa apo achimisa furemu yekunze, kuti inyatsove yakabatana neyakavakirwa furemu.
Matanda anofanira kumira, uye matanda anofanira kudzadzarika nekudzika kubva pasi pekutanga. Iko kutsauka kwekutwasuka kwedanda rakamira hakufanirwe kunge kwakakura kupfuura 1/200 yekukwirwa kwekusimuka, uye kumusoro kwedanda rakamira kunofanirwa kuve 1.5m kukwirira kupfuura denga reimba. Panguva imwecheteyo, majoini akamira akatwasuka anofanirwa kutora zvekusunga matako kunze kwekubatana pamakumbo pamatanho epamusoro.
Pasi pe scaffold inofanirwa kuve yakashongedzwa netambo uye yakatwasuka tsvimbo dzinotsvaira. Iyo tsvimbo yekutsvaira inofanirwa kugadzikwa padanda yakatwasuka kwete anopfuura mazana maviri emamirimita kubva pamusoro peiyo shim block ine yekurudyi-kona mabhatani, uye iyo yakatwasuka yekutsvaira tsvimbo inofanirwa kugadziriswa nekukasika pazasi peiyo yakatwasuka yekutsva tsvimbo neakarurama-kona mabhatani. Padanda.
Kune mambure akapetwa mukati mesherefu yekushandisa, uye 180mm kukwirira uye 50mm gobvu rehuni tsoka yakarongedzwa kumagumo nekunze kwesherefu. Iyo scaffolding yeiyo inoshanda layer ichaiswa zvizere uye zvakadzikama.
Kana uchiisa scaffold bhodhi buti, pane maviri akatwasuka akatwasuka matanda pazvibatanidzwa, uye majoini emapurafold mabhodhi akaiswa nekukwirana anofanirwa kunge ari pane yakatwasuka yakatwasuka matanda. Hapana bhodhi rekuongorora rinotenderwa, uye hurefu hwe scaffold board haufanire kupfuura 150mm.
Iyo hombe crossbar inofanira kuiswa pasi pekidiki crossbar. Pakati peiyo tsvimbo yakatwasuka, shandisa zvinonamira kurudyi-kona kusungira tsvimbo yakatwasuka. Kureba kwechinjiso chikuru hachifanirwe kunge chiri pasi pe3 spans uye kusiri pasi pe6m.
Iyo inoshandiswa senge inoshanda furemu panguva yechimiro uye yekushongedza nhanho yekuvaka. Iyo yakapetwa-yakapetwa kaviri-pole yekumisikidza scaffold ine chinhambwe chinhambwe che1.5m, mutsara mutsara we1.0m, uye nhanho nhanho ye1.5m.
Mukumisikidzwa, imwe neimwe nhete yefuremu yekunze inofanirwa kunge yakasungirirwa pachimiro munguva kuti ive nechokwadi chekuchengetedza panguva yekumiswa. Iko kutwasuka uye yakatwasuka kutsauka kwematanda kunofanirwa kugadziriswa pamwe nekumiswa, uye zvekusunga zvinofanirwa kusimbiswa nenzira kwayo.
Pfungwa dzakakosha dzekubvisa kuvaka
Kuputswa kwe scaffolding uye formwork rutsigiro system inofanirwa kuitwa zvine mutsindo zvinoenderana nezvinodiwa zvehunyanzvi hunyanzvi zviyero uye zvakakosha zvirongwa. Munguva yekuparadza, chivakwa uye chivakwa chekutarisira chinofanira kuronga kuti vashandi vakakosha vatarise.
Scaffolding inofanira kubviswa kubva kumusoro kusvika pasi netai netai. Kubata pamwe chete kwekumusoro nekudzika kwakarambidzwa zvakanyanyisa, uye zvikamu zvekubatanidza madziro zvinofanirwa kubviswa nhurikidzwa nedare pamwe neiyo scaffolding. Izvo zvakanyatsorambidzwa kubvarura hwese hwese kana akati wandei akaturikidzana emadziro asati abvarura scaffolding.
Kana iwo musiyano wehurefu hwekuparadzaniswa kwechikamu wakakura kupfuura nhanho mbiri, zvekubatanidza zvidimbu zvemadziro zvinofanirwa kuwedzerwa kusimbisa.
Paunenge uchibvisa scaffolding, bvisa tambo yemagetsi iri padhuze kutanga. Kana paine yakavigwa tambo yesimba pasi pevhu, tora matanho ekudzivirira. Izvo zvinorambidzwa zvachose kudonhedza zvekusunga uye mapaipi esimbi akatenderedza tambo yemagetsi.
Mapaipi esimbi akadonhedzwa, zvekusungisa nezvimwe zvekushandisa zvakarambidzwa zvachose kukandwa pasi kubva pakakwirira.
Kubviswa kwedanda rakamira (6m kureba) kunofanirwa kuitiswa nevanhu vaviri. Danda rakamira mukati me 30cm pasi pechigadziko chakakosha chakarambidzwa kubviswa nemunhu mumwe, uye zvinofanirwa kupedzisa kubviswa danho repazambuko repamusoro risati rabviswa. Basa risiri iro rinogona kukonzera nyore kukwira-kwakakwirira kudonha (kusanganisira Vanhu nezvinhu).
Iyo hombe crossbar, scissor brace, uye diagonal brace inofanirwa kubviswa pekutanga, uye yepakati zvigaro zvekusungira zvinofanirwa kubviswa pekutanga, uye yekupedzisira bhureki inofanirwa kutsigirwa mushure mekubata pakati; panguva imwecheteyo, chigero chekusungisa uye diagonal brace inogona kungobviswa pane yekuparadza dura, kwete zvese panguva imwe chete, bvisa chigero chishongo chekuchengetedza mabhandi anofanira kunge akapfekwa panguva iyoyo, uye vanhu vaviri kana vanopfuura vanofanira kubatana kuti vabvise.
Iwo ekubatanidza madziro zvikamu haafanire kubviswa pamberi. Izvo zvinongogona kubviswa chete kana zvabviswa rukoko neyakaenzana kune iyo inosanganisa madziro zvikamu. Matemba ekupedzisira anobatanidza asati abviswa, kukanda zvitsigiso kunofanirwa kuiswa pamatanda akamira kuti ave nechokwadi chekuti matanda akamira ari kubviswa. kugadzikana.